Marka 5 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Nosoratan’i Marka 5:1-43
Nalefan’i Jesosy tao amin’ny andian-kisoa ny demonia (1-20)
Zanakavavin’i Jairo; vehivavy nikasika ny akanjon’i Jesosy (21-43)
5 Ary tonga teny ampitan’ny ranomasina, tao amin’ny faritra nisy ny Gerasianina,+ izy ireo. 2 Vao niala tao an-tsambokely i Jesosy, dia nifanena tamin’ny lehilahy iray nisy fanahy maloto. Avy teny am-pasana io lehilahy io. 3 Teny amin’ny fasana teny foana izy, ary mbola tsy nisy nahavita namatotra azy mihitsy, na tamin’ny rojo vy aza. 4 Matetika izy no nofatorana tamin’ny gadra vy sy rojo vy, nefa notapahiny ny rojo vy ary nopotipotehiny ny gadra vy. Tsy nisy olona nahatana azy mihitsy. 5 Ary niantsoantso mafy tsy an-kijanona teny am-pasana sy teny an-tendrombohitra izy, na andro na alina, ary nodidididiany tamin’ny vato ny tenany. 6 Vao nahita an’i Jesosy teny lavidavitra teny anefa izy, dia nihazakazaka ary niankohoka teo anatrehany.+ 7 Ary niantsoantso mafy izy, ka niteny hoe: “Fa inona koa no anelingelenanao ahy atỳ,* ry Jesosy Zanak’ilay Andriamanitra Avo Indrindra ô? Asaiko mianiana amin’ny anaran’Andriamanitra ianao mba tsy hampijaly ahy.”+ 8 Efa niteny taminy mantsy i Jesosy hoe: “Mivoaha amin’ity lehilahy ity, ry fanahy maloto!”+ 9 Nanontany anefa i Jesosy hoe: “Iza no anaranao?” Ary hoy ilay fanahy maloto taminy: “Andian-tafika no anarako, satria be dia be izahay.” 10 Ary niangavingavy an’i Jesosy izy mba tsy handroaka an’ireo fanahy maloto ireo hiala amin’ilay faritra.+ 11 Ary nisy andian-kisoa+ nandrasana teo amin’ilay tendrombohitra.+ 12 Koa niangavy an’i Jesosy ireo fanahy maloto ireo hoe: “Mba avelao hiditra ao amin’iretsy kisoa iretsy re izahay e!” 13 Dia neken’i Jesosy izany. Nivoaka àry ireo fanahy maloto ka niditra tao amin’ireo kisoa ireo. Ary nirifatra nankeny amin’ny hantsana* ilay andian-kisoa, izay nisy kisoa 2 000 teo ho eo, dia nivarina tany an-dranomasina ka maty an-drano. 14 Ireo mpiandry kisoa kosa nandositra ka nitantara an’izany tao an-tanàna sy tany ambanivohitra. Dia tonga nijery an’izay nitranga ny olona.+ 15 Tonga teo amin’i Jesosy àry izy ireo, ka nahita fa nipetraka sy efa niakanjo sady efa salama saina ilay lehilahy nisy demonia, ilay nisy an’ilay andian-tafika. Koa natahotra ny olona. 16 Izay nahita an’izany koa dia nitantara tamin’izy ireo izay nitranga tamin’ilay lehilahy nisy demonia sy ny nanjo an’ireo kisoa. 17 Niangavian’izy ireo àry i Jesosy mba hiala tao amin’ilay faritra nisy azy ireo.+ 18 Rehefa niakatra tao an-tsambokely izy, dia niangavy azy ilay lehilahy nivoahan’ny demonia mba hamela azy hiaraka aminy.+ 19 Tsy navelan’i Jesosy anefa ilay lehilahy, fa hoy izy taminy: “Modia any amin’ny havanao, dia tantarao amin-dry zareo daholo izay nataon’i Jehovah* taminao sy ny namindrany fo taminao.” 20 Dia lasa ilay lehilahy, ka nanomboka niresaka momba an’izay rehetra nataon’i Jesosy taminy, tany amin’ny faritr’i Dekapolisy.* Ary gaga daholo ny olona. 21 Rehefa avy nandeha sambokely indray i Jesosy ka efa ho tody teny ampita, dia nisy vahoaka be nitangorona teo aminy, teo amoron-dranomasina.+ 22 Dia tonga ny lehilahy iray antsoina hoe Jairo, izay anisan’ny mpitantana ny synagoga, ka niankohoka teo an-tongotr’i Jesosy+ raha vao nahita azy. 23 Niangavy an’i Jesosy imbetsaka izy hoe: “Marary mafy* ny zanako vavikely. Andao re ho any e! Dia ametraho tanana izy+ mba ho sitrana ka ho velona ihany.” 24 Dia lasa niaraka tamin’ilay lehilahy i Jesosy. Ary nisy vahoaka be nanaraka azy sady nifanesika teo aminy. 25 Ary nisy vehivavy iray nandeha ra+ efa nandritra ny 12 taona,+ tamin’izay. 26 Be dia be ny dokotera efa nitsabo azy, saingy nampijaly be azy ny fitsaboana nataon’izy ireny, sady nandany ny fananany rehetra. Tsy nihasalama akory anefa izy fa vao mainka aza nihanarary. 27 Rehefa henony ny momba an’i Jesosy, dia nanatona azy avy tao aoriana tao anaty vahoaka izy, ka nikasika ny akanjony ivelany.+ 28 Hoy mantsy izy: “Raha mikasika ny akanjony ivelany fotsiny aho izao, dia ho sitrana.”+ 29 Ary tonga dia nijanona ny ra nandeha taminy, ka tsapany fa sitrana tamin’ilay aretina nampijaly azy ny vatany. 30 Tonga dia fantatr’i Jesosy fa nisy hery+ niala taminy ka nitodika izy, tao anaty vahoaka, ary nanontany hoe: “Iza no nikasika ny akanjoko teo?”+ 31 Hoy anefa ny mpianany taminy: “Hitanao fa mifanesika aminao ny vahoaka, ka maninona ianao no manontany hoe: ‘Iza no nikasika ahy?’” 32 Nijery ny manodidina azy anefa izy mba hahitana an’ilay nikasika azy. 33 Dia nanatona ilay vehivavy, sady natahotra sy nangovitra ihany. Fantany koa hoe sitrana izy. Nandohalika teo anatrehan’i Jesosy izy, ka notsoriny taminy ny marina rehetra. 34 Dia hoy izy tamin’ilay vehivavy: “Ny finoanao no nahasitrana anao, anaka. Mirary soa ho anao aho,+ ary enga anie ianao tsy ho tratran’iny aretina nampijaly anao iny intsony!”+ 35 Tamin’izy mbola niteny iny, dia nisy lehilahy tonga avy tany an-tranon’ilay mpitantana ny synagoga, nilaza hoe: “Maty ny zanakao! Koa tsy aleo ve tsy sahiranina intsony ny Mpampianatra?”+ 36 Henon’i Jesosy anefa ilay resaka, ka hoy izy tamin’ilay mpitantana ny synagoga: “Aza matahotra* fa minoa fotsiny.”+ 37 Ary tsy nisy navelany hanaraka azy, afa-tsy i Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin’i Jakoba.+ 38 Dia tonga tao an-tranon’ilay mpitantana ny synagoga izy ireo. Ary hitan’i Jesosy fa nisy olona nitabataba sy nitomany ary nidradradradra mafy tao.+ 39 Rehefa niditra izy, dia hoy izy tamin’izy ireo: “Maninona ianareo no mitomany sy mitabataba hoatr’izao? Tsy maty ilay zaza fa matory.”+ 40 Dia nihomehezan’izy ireo izy. Nasainy nivoaka ny trano anefa izy rehetra, dia avy eo nentiny ny ray aman-drenin’ilay zaza sy izay niaraka taminy, ka nankao amin’ilay nisy an’ilay zaza izy. 41 Ary noraisiny ny tanan’ilay zaza, ka hoy izy taminy: “Talita komy.” Raha adika izany dia hoe: “Ry zazavavy, izao no teniko aminao: Miarena!”+ 42 Tonga dia niarina ilay ankizivavy 12 taona ka nanomboka nandeha. Vao nahita an’izany ny ray aman-dreniny, dia faly tsy nisy hoatr’izany. 43 Namerimberina nandrara* azy ireo anefa i Jesosy mba tsy hampahafantatra an’izany na amin’iza na amin’iza.+ Ary nasainy nomena sakafo ilay ankizivavy.
^ Na: “Misy zavatra iombonako aminao angaha moa.”
^ Na: “tevana.”
^ Na: “tany amin’ilay Faritra Misy Tanàna Folo.”
^ Na: “Efa ho faty.”
^ Na: “Aza matahotra intsony.”
^ Na: “Nandrara mafy.”